Badaha aduunka: astaamaha, kala soocida iyo kala duwanaanshaha noolaha | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | 27/07/2021 09:36 | Ciencia
In kasta oo biyaha meeraha oo dhami isku mid yihiin, haddana bani’aadamku wuxuu u qaybiyey biyahan bad iyo baddba iyadoo loo eegayo astaamaha isku biyo iyo juquraafi ahaan meesha ay ku taal. Sidan oo kale, waxaa suurtagal ah in si fiican loo kala saaro kala duwanaanshaha kala duwanaanta, khayraadka dabiiciga ah iyo juqraafiga. Way badan yihiin badaha adduunka ka baxsan 7-da badood ee loo malaynayay inay soo jireen. Mid kasta oo ka mid ahi wuxuu leeyahay astaamo u gaar ah oo ay jiraan qaar ka waaweyn kuwa kale.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa badaha kala duwan ee aduunka iyo astaamaha ugu waaweyn.
1 Badaha aduunka
2 5ta badood ee aduunka ugu waawayn
2.1 Badda Carabta
2.2 Badda Koonfurta Shiinaha
2.3 Badda Caribbean
3 Badaha Spain
3.1 Badda Mediterranean
3.2 Badda Alboran
3.3 Badda Cantabrian
Baddu waa deegaanka ay ku noolyihiin kumanaan nooc oo ah nooca dhexdhexaadka ah ee ay maraakiibtu ka soo gudbaan. Baaxadoodu waa mid aad u weyn, aadna uga ballaadhan dhulka dushiisa, welina waxay ku jiraan waxyaalo qarsoon oo badan. Badaha iyo waxay ku yaalliin meel u dhow khaanadaha qaaradaha. Shelf Qaaradda waa halka laga helo tiro badan oo kheyraad dabiici ah iyo noole kala duwan. Waa aag ku dhow qaaradaha sida eraygiisa u muujinayo.
Inta badan noolaha kala duwan ee ku nool dhulkeenna waxay ku jiraan badaha adduunka. Sidoo kale, lid ku ah caqiidada caanka ah, iyagu waa sambabaha dhabta ah ee dhulka. Aadanaha, waa goobo firaaqo, madadaalo iyo fikir. Ilo biyo ah oo isdaba-joog ah laakiin aan dhammaanayn oo gaari kara guryo ku yaal meelo badan oo adduunka ah. Kalluumeysiga dartiis, sidoo kale waa cunsur aasaasi u ah nafaqada dalka. Waxay sidoo kale aasaas u yihiin howlaha dalxiiska waxayna faa iidooyin badan u keeneen dalalkeena oo kale.
Haddii aynu kala yeelan lahayn badaha adduunka oo qaarad loo qaybiyey, waxaan haynaa liis sidan ah:
Europe: Adriatic, Baltic, White, Channelka Ingiriiska, Cantabrian, Celtic, Alboran, Azov, Barents, Friesland, Ireland, Marmara, North, Aegean, Ionian, Mediterranean, Black and Tyrannian.
America: Argentine, Hudson Bay, Beaufort, Caribbean, Chilean, Cortés, Ansenuza, Bering, Chukotka, Grau, Greenland, Labrador, Sargasso iyo harooyinka waaweyn.
Asia: Jaale, Carabi, Caddaan, Caspian, Andaman, Aral, Band, Bering, Celebes, South China, East China, Philippines, Japan, Okhotsk, East Siberia, Sulu, Inland Seto, Kara, Laptev, Dead and Red.
Afrika: Alboran, Arabian, Mediterranean iyo Cas.
Oceania: Laga soo bilaabo Arafura, Bismarck, Coral, Filibiin, Halmahera, Solomon, Tasmania, iyo Timor.
5ta badood ee aduunka ugu waawayn
Marka la dheereeyo, waxaa jira liistada 5ta badood ee adduunka ugu waaweyn. Kuwaani waa kuwan soo socda:
Badda Carabta oo leh 3.862.000 km²
Badda Koonfurta Shiinaha oo leh 3.500.000 km²
Badda Caribbean oo leh 2.765.000 km
Badda Mediterranean oo leh 2.510.000 km²
Bering bada leh 2.000.000 km XNUMX
Waxaan si faahfaahsan uga sii faahfaahin doonnaa maxay yihiin astaamaha badahan waaweyn.
Isagoo daboolaya aag ku dhow 4 milyan oo kiiloomitir oo laba jibbaaran, Badda Carabta waa badda ugu weyn adduunka. Waxaa sidoo kale loo yaqaanaa Badda Cumaan iyo Badda Carbeed. Waxay ku taal Badweynta Hindiya. Miyuu qoto dheer yahay ku dhowaad 4.600 mitir oo wuxuu leeyahay xeebo Maldives, India, Oman, Somalia, Pakistan iyo Yemen.
Badda Carabtu waxay ku xiran tahay Badda Cas iyada oo loo maro marinka Bab-el-Mandeb iyo waxay ku xiran tahay Gacanka Beershiya ee mara gacanka Cumaan.
Jasiiradaha ugu muhiimsan waa Jasiiradaha Laccadive (Hindiya), Masira (Cumaan), Socotra (Yemen) iyo Astora (Baakistaan).
Badda Koonfurta Shiinaha
Baaxadda dhul baaxadiisu tahay 3,5 milyan oo kiiloomitir oo laba jibbaaran, Koonfurta Badda Shiinaha waa aagga labaad ee badda ugu weyn adduunka. Waxay ku taal qaaradda Aasiya, qaar badan oo ka mid ahna waa jasiirado ay ka dhacaan muranno dhuleed oo u dhexeeya dalalka Aasiya. Dhibaatooyinka waaweyn ee haysta baddaan waxaa ka mid ah luminta kala duwanaanshaha noolaha. Khasaaradan waxaa sabab u ah kalluumeysiga xad dhaafka ah iyo dhaqanka Aasiyaanka ah inay cunaan kalluunka ceeriin. Meelahan waxay hodan ku yihiin kalluunka noocyadiisa kala duwan waxaana saameeya kalluumeysiga xad-dhaafka ah.
Sidoo kale waa inaad tixgelisaa dhinaca xun sida wasakheynta. Ha iloobin in Shiinuhu leeyahay mid ka mid ah wasakhda hawada ugu xun iyo qashinka lagu daadiyo. Wasakheynta biyaha ku jira baddani aad ayey u sarreeysaa.
Marka laga reebo jasiiradaha dahabiga ah ee leh ciid badan oo cadcad iyo geedo qumbaha xeebta ku yaal, Badda Kariibiyaanka waa mid ka mid ah badaha ugu mool dheer meeraha, waxay gaarayaan qoto dheer 7,686 mitir. Marka laga fiiriyo badaha badda, waa badweyn kulayl furan. Mid ka mid ah meelaha leh kala duwanaanshaha noolaha ugu badan iyo xeeb aad u nadiif ah. Sababtaas awgeed, waxay noqotay mid ka mid ah meelaha ugu caansan ee loo dalxiis tago adduunka. Sannadba sanadka ka dambeeya, kumanaan dalxiisayaal ah ayaa taga jasiiradan sanadka oo dhan.
Isbaanishka waxaan ku leenahay 3 badood iyo bad weyn oo xuduud la leh jasiiradda. Waxaan leenahay Badda Dhexe, Badda Cantabrian, Alboran Sea iyo Atlantic Ocean.
Aaggan baddu wuxuu ka kooban yahay biyo aad u tiro badan, taas oo u dhiganta 1% wadarta guud ee badda adduunka. Mugga biyaha waa 3.735 milyan oo cubic kilomitir celcelis ahaan biyaha waa 1430 mitir. Waxay leedahay wadar dherer ah 3860 kiiloomitir iyo aag guud oo dhan 2,5 milyan oo kiilomitir oo laba jibbaaran. Intaas oo biyo ah waxay u oggolaanayaan saddexda jasiiradood ee koonfurta Yurub inay qubeystaan. Jasiiradahaas waa Jasiiradda Iberia, Jasiiradda Talyaaniga iyo Jasiiradda Balkan. Waxay sidoo kale ku maydhaa jasiiradda Aasiya ee loo yaqaan Anatolia.
Magaca Mediterranean wuxuu ka yimid Roomaankii hore. Waqtigaas waxaa loo yaqaan "Mare nostrum" ama "Baddeenna". Magaca Mediterranean wuxuu ka yimid Laatiinka dhexdhexaad terraneum, oo macnaheedu yahay bartamaha dhulka. Magacan waxaa loogu magacaabay asalka bulshada, maxaa yeelay waxay ogaayeen oo keliya dhulka ku xeeran aaggan badda. Tani waxay ka dhigeysaa inay u maleeyaan in badda dhexe ay tahay bartamaha adduunka.
Tani waxay noqon kartaa wax weyn oo aan laga aqoon biyaha Isbaanishka, laga yaabee inay ugu wacan tahay dushiisa yar marka la barbar dhigo biyaha kale. Badda Alboran waxay u dhigantaa barta galbeed ee Badda Dhexe waxayna dhererkeedu yahay 350 kiiloomitir bari ilaa galbeed. Ballaca ugu ballaadhan ee woqooyi ilaa koonfur waa 180 kiilomitir. Celceliska qoto dheer waa 1000 mitir.
Badda Cantabrian waa dhererkeedu yahay 800 kiilomitir oo leh qoto dheer ugu badnaan 2.789 mitir. Heerkulka biyaha dusha ayaa ka beddela 11ºC xilliga qaboobaha oo u beddela 22ºC xagaaga. Badweynta Atlantik waxay dhaqdaa xeebta waqooyi ee Isbaanishka iyo koonfurta-galbeed ee fog ee xeebta Atlaantik ee Faransiiska. Mid ka mid ah astaamaha lagu yaqaan Badda Cantabrian waa dabaylaha xoogga badan ee ku dul dhaca, gaar ahaan waqooyi-galbeed. Asalka ciidamadani waxay ka dheceen jasiiradaha Ingiriiska iyo Badda Waqooyiga.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto badaha kala duwan ee adduunka iyo astaamahooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Badaha aduunka